လစာ အများဆုံးရသည့် ဂိုးသမားအဖြစ် မန်ယူနှင့် ဒီဂီယာ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးတော့မည်၊ လီဗာပူးနှင?? - Yangon Media Group
လစာ အများဆုံးရသည့် ဂိုးသမားအဖြစ် မန်ယူနှင့် ဒီဂီယာ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးတော့မည်၊ လီဗာပူးနှင??
မန်ယူအသင်းသည် စပိန်ဂိုးသမား ဒီဂီယာအား တစ်ပတ်လုပ်ခလစာပေါင် ၄ သိန်းဖြင့် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဒီဂီယာ သည် လာမည့်ရာသီအကုန်တွင် မန်ယူ အသင်းနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး တော့မည်ဖြစ်ရာ မန်ယူအသင်းက ¤င်း ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အပို ဆုကြေးအပြင် တစ်ပတ်လုပ်ခလစာ ပေါင် ၄ သိန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာမကြာမီ သဘောတူ ညီမှုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
မန်ယူအသင်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကို သဘောတူညီခဲ့ပါက ဒီဂီယာသည် လစာ အများဆုံးရရှိသည့် ဂိုးသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဖော် အလက် ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်နည်းတူ အိုးလ်ထရက် ဖို့ဒ်၏ လစာအများဆုံးကစားသမားဖြစ် လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်း၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရသော ဒီဂီယာသည် မူလက မန်ယူအသင်းမှ ထွက်ခွာရန်စဉ်းစားခဲ့သော်လည်း ယခု ကဲ့သို့ မြင့်မားသည့်လစာဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု ကြောင့် အသင်းတွင်ဆက်နေရန် စိတ် ဝင်စားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗြိတိန် သတင်းများ၏ဖော်ပြချက်အရ ဒီဂီယာ သည် မန်ယူအသင်းနှင့် မကြာမီသက် တမ်းတိုး စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်တော့မည် ဟုသိရသည်။
မန်ယူအသင်းသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့်ဂိုး သမားတစ်ဦး ကို အသင်းတွင်ဆက်ထိန်းထားရန် ဆန္ဒရှိနေသည့်အပြင် နည်းပြမော်ရင် ဟိုကလည်း ဒီဂီယာကို အသင်း တွင် ဆက်ရှိစေချင်လျက်ရှိ သည်။ ဒီဂီယာနှင့်ပတ်သက်၍ မော်ရင်ဟိုက ”ကျွန်တော်တို့အနေ နဲ့ မန်ယူအသင်းကို အရင်လိုမြင်တွေ့ချင် တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမား တွေရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်”ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ မန်ယူအသင်းသည် လာမည့်ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်း စပါး နောက်ခံလူ အဲလ်ဒါဝှီးကိုလည်း ပေါင် သန်း ၄ဝ ဖြင့်ခေါ်ယူရန် ပစ်မှတ်ထား လျက်ရှိသည်။
အခြားသတင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်းကြီး ပေါလ်အင့်က မန်ယူအသင်းသည် ယခင် က လီဗာပူးနှင့်တွေ့ဆုံတိုင်း အင်တိုက် အားတိုက်ကစားတတ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် ယင်းအခြေအနေမှာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဟု သုံးသပ်ပြောဆို သွားခဲ့သည်။ ပေါလ်အင့်သည် လီဗာပူး နှင့်မန်ယူ နှစ်သင်းစလုံးတွင် ကစားခဲ့ ဖူးသူဖြစ်ပြီး လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရင်ဆိုင်ကြမည့် လီဗာပူး-မန်ယူပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ¤င်းက ”၁၉၈၉ မှာ မန်ယူကို ကျွန်တော်သွားကစားတော့ သူတို့က ပြိုင်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်။ လီဗာ ပူးနဲ့ရင်ဆိုင်မယ့်ပွဲဆိုရင် တကယ့်ကို လေးလေးနက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ အခု တော့ လီဗာပူးက မန်ယူနဲ့ပွဲအတွက် အပြင်း အထန်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရ တယ်”ဟု သုံးသပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ တိုင်ကြားနိုင်မည့် လွှတ်တော်ပြင်ပ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြ?